Simbi waya Factory, Vatengesi - China Simbi waya Vagadziri
Kwakakurudzira CHAIN ​​LINK MESH
CHAINI CHETE CHETE CHEMAZUVA
AMERICAN T Fence POST-DZIDZO ...
RAZOR YAKAKOMBERWA WAYI
Razor barbed waya, iwe unogona zvakare kuidana se concertina waya, mesh yesimbi mitsetse ine yakapinza micheto iyo chinangwa ndechekudzivirira kupfuura nevanhu. Izwi rekuti “reza waya”, kuburikidza nekushandisa kwenguva refu, rakawanzoshandiswa kutsanangura zvigadzirwa zvematepi. Razor waya inopinza zvakanyanya kupfuura iyo yakajairwa waya yakarukwa; rakatumidzwa zita kubva pakuonekwa kwaro asi harina kupinza. Iwo mapoinzi akapinza kwazvo uye akagadzirwa kubvarura uye kubvarura zvipfeko nenyama.
Yakakurudzira waya, iwe unogona kuidanawo seyakakurudzira simbi waya, ndeye yakachinjika waya iyo yakave ichiitika chemakemikari maitiro e galvanization. Galvanization inosanganisira kupfeka waya isina simbi netambo inodzivirira, ngura-inodzivirira, senge zinc. Kwakakurudzira waya yakasimba, ngura inodzivirira uye yakawanda-ine chinangwa. Izvo zvinouyawo nenzira dzakasiyana siyana.
Kwakakurudzira simbi waya iri kuzvisunga-nyoro uye nyoro uye kusanduka kuti nyore kushandisa. Iyo waya inogona kushandiswa kune akasiyana mapurojekiti, kusanganisira hunyanzvi uye hunyanzvi uye kunyangwe fenzi-kugadzirisa. Maoko anogara akachena uye akachekwa akasununguka. Kink inopikisa.
Tambo dzakakangwa, inozivikanwawo seyakachekwa waya, imhando yesimbi inochengeterwa waya ine mitsetse yakapinza kana mapoinzi akarongwa panguva dzakatarisana netambo. Iyo inoshandiswa kuvaka fenzi dzisingadhuri uye inoshandiswa pamusoro pemadziro akakomberedza chivakwa chakachengetedzwa. Icho zvakare chakakoshesa chimiro chemasvingo ehondo yemugero (sechipingamupinyi chetambo).
Munhu kana mhuka iri kuyedza kupfuura kana pamusoro pewaya ine barbed ichatambura kusagadzikana uye pamwe nekukuvara (izvi zvinonyanya kuitika kana fenzi iri zvakare yemagetsi). Barbed waya fenzi inoda chete fenzi mapango, waya, uye ekugadzirisa michina yakadai senge staples. Izvo zviri nyore kuvaka uye nekukurumidza kumisa, kunyangwe nemunhu asina hunyanzvi.